रसाए दुनियाका आँखा ! देश छा, डेर भागेका अफगानी राष्ट्रपतिले विदेशबाट पहिलो पटक दिए सार्व जनिक अभि, व्यक्ती, – Ap Nepal
August 17, 2021 402
अफगानिस्तानका अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनीले राजधानी काबुलमा तालिबानले कब्जा गरेपछि देश छाडेका छन् । केही रिपोर्टमा उनी ओमानमा अमेरिकी एयरबेसमा पुगेको र अब अमेरिका जान सक्ने बताइएको छ । अल जजीराले भने उनी उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्कन्द पुगेको भनेको छ ।
देश छाडेका कारण भइरहेको आलोचनाको बीचमा अशरफ गनीले सामाजिक संजालमार्फत सफाइ पेश गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ‘आज मेरो अगाडि कठिन विकल्प छ । मैले कठिन फैसला लिनुपर्यो । म तालिबानको अगाडि अडिग भएर उभिनुपर्थ्यो । मैले २० वर्षदेखि आफ्नो जीवन यहाँका जनतालाई बचाउनमा बिताएको छु । मैले यदि देश नछोडेको भए यहाँका जनताको लागि परिणाम निकै खराब हुन्थ्यो ।’
उनले अगाडि लेखेका छन् ‘तालिबानीहरुले मलाई हटाएका छन् । उनीहरु काबुलमा यहाँका जनतामाथि आक्रमण गर्नको लागि यहाँ आएका हुन् । तासिलबानीले हिंसाबाट लडाइँ जितेका छन् । अब उनीहरुको जिम्मेवारी हो कि उनीहरु अफगानिस्तानका जनताको रक्षा गरुन् । रक्तबातबाट बच्नको लागि म अफगानिस्तानबाट जानु नै सही लाग्यो ।’
तालिबानी कमाण्डरले अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भवनमा कब्जा गरेको बताएका छन् । स्थानीय मिडियाका अनुसार तालिबानका डेप्युटी लिडर मुल्ला बरादरले आफूहरु यसरी फर्किनेछन् भन्ने अपेक्षा नगरेको बताएका छन् ।
उनले अब आफूहरुले कसरी अफगानी जनताको हितको रक्षा गछृन् भन्ने कुराले आफ्नो परीक्षण हुने बताए । टोलो न्युजका अनुसार तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिदले लुटपाट र अराजकता रोक्न सुरक्षा बलले छाडेका काबुलका चौकी नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । –एजेन्सीको सहयोगमा -अनलाइनमार्गबाट।
Prevयी साना ०९ वर्षका हेड-मास्टर जाे पुरै स्कुललाई पढाउँछन् ? – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextपरीक्षार्थीहरुले परिक्षा हल भित्रको टिक-टक भाइरल- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
सम्झने क्षमता बढाउने प्रभावकारी काइदा, यी हुन् ८ तरिका